Kitra – «Mondial 2018» : misy mandrahona ho faty i Messi | NewsMada
Kitra – «Mondial 2018» : misy mandrahona ho faty i Messi
Herinandro mialoha ny fanombohan’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany “Mondial 2018”, taranja baolina kitra, isika anio. Fihaonana, hotanterahina any Rosia. Efa ao anatin’ny fanomanantena faramparany avokoa ny rehetra, ankehitriny. Anisan’izany ny Albiceleste-n’i Arzantina.
Raha ny fandaharam-potoana, tokony hanao lalao firahalahiana amin’i Israely ny Arzantin, ny asabotsy 9 jona ho avy izao. Fihaonana, hatao any Jerosalema. Manoloana izany, mandrahona ny hamono ilay kintan’ny baolina kitra arzantin, i Lionel Messi, ry zareo Palestinianina, raha toa ka mandray anjara amin’izany fihaonana izany.
Raha tsiahivina, ny fanehoan’i Messi sarina ankizikely palestinianina naratra, tamin’ny tambajotran-tserasera, tamin’ny taona 2014, izay niteraka fanehoan-kevitra maro, no tsy zakan’ny Palestinianina ka anton’izao fandrahonana izao. Nanamafy i Jibril Rajoub, filohan’ny federasiona baolina kitra ao Palestinina, tsy hilalaovan’i Messi amin’io fihaonana io, mba tsy hisian’ny adihevitra politika eo amin’ny firenena roa tonta.
Noho ny tsy fahafalian’ireo vahoaka palestinianina, nandoro ny “maillot”-n’i Messi izy ireo. “Aminay, mariky ny fandriampahalemana sy fitiavana i Lionel Messi koa mangataka izahay ny tsy handraisany anjara izay karazany fanadiovan-keloka», hoy izy tamin’ireo mpanao gazety.
Nangina ny Israelianina
Etsy ankilany, tsy naneho hevitra mihitsy mahakasika ity fandrahonana ho faty an’i Messi ity, ny tomponandraikitry ny federasiona baolina kitra ao Israely. Amin’izy ireo, efa manantena ny hahita ity kalaza eran-tany amin’ny baolina kitra ity, ny vahoaka israelianina.
Manoloana ity fandrahonana an’i Messi ity, nanapa-kevitra ny mpanazatra ny Albiceleste sy ny federasiona arzantina fa hanafoana ilay lalao amin’i Israely.
Tsiahivina fa ao amin’ny vondrona “D” ny Albiceleste-n’i Arzantina, miaraka amin’i Islande, Kroasia ary i Nizeria.
Lalao voalohany, hatrehin’i Arzantina, amin’ity “Mondial 2018”, ny fifandonany amin’i Islande, ny 16 jona, ho avy izao, ao amin’ny kianja Spartak Moscou. Ny fihaonana faharoa, dia ny fihaonany amin’i Kroasia, ny 21 jona, ao amin’ny kianja Nijni-Novgorod ary ny lalao farany dia ny fikatrohan-dry zareo amin’ny Voromaherin’i Nizeria, ny 26 jona, ao amin’ny kianja St Petersbourg.